Ururka Saxafiyiinta SOJDU Oo Cambaareeyey Dilkii Agaasimaha Somaliweyn
Ururka Saxafiyiinta SOJDU ee xaruntiisu tahay Dalka CANADA ayaa wuxuu ku baaqay in la joojiyo dilalka suxufiyiinta ka howlgala Soomaaliya.
Warbixin uu soo saaray xafiiska ugu sareeya ee Ururkaan SOJDU ee CANADA xaruntiisu tahay , in la helo kuwo markasta dilalaka ugeysta Saxafiyiinta soomaaliyeed oo ku shaqeeya Allow Sahal.
Mudo aan dhameyn 3 bilood suuragal ma ahan ayuu yiri Ururkaan in tiro saxafiyiin ilaa 3 gaareysa si kama ah loo dilo isla markaana ay baxsadaan dembiiliyaashii dilka geystey dhamaantood.
Agaasimihii Soomaaliweyn ayaa ugu dambeeyey Marxuum "Abuukar Xasan Maxamuud (Kadaf) wuxuu ahaa wariyihii saddexaad oo lagu dilo Muqdisho muddo laba bilood gudahood ah iyadoo ciidamada dowladdu ay hadda ka taliyaan Muqdisho oo dhan," ayaa yiri Gudoomiyaha Ururka SOJDU Mr.Yaasiin Abiikar.
Marxuum Abuukar Kadaf oo ahaa agaasimaha idaacaddii Somaliweyn ayaa lagu toogtay iridka gurigiisa habeenkii Talaadada, waxaana dilay laba nin bastoolado ku hubeysan, waxaana isla shalay lagu aasay qubuuro ku yaalla Muqdisho.
Gudoomiyaha Ururka SOJDU Yaasiin Abiikar wuxuu ka dalbadey Madaxda Dowlada KMG in La Sugo AManka Saxafiyiinta Goobaha ay ka taliso , sidoo kale waa in dowladuay soo cadeysaa cida ka dambeysey Dilka Agaasimaha iyo wariyaashii ka horeeyeyba.
Qaar ka mid ah dadkii ka dambeeyay dilkii Gaalkacyo oo la xirey